That's so good, right?: October 2012
ပါးစပ်ဆိုတာ အစားအသောက်စားဖို့၊ ဂါထာမန္တာန် အမွန်အမြတ်ဘုရားစာတွေရွတ်ဆိုဖို့၊ ပြီးတော့ မိမိရဲ့ဘုန်းကံသည် အာခံတွင်းမှာ တည်သည်ဆိုသူများအတွက် အထွဋ်အမြတ်ထားရာ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့အစိတ်အပိုင်းအင်္ဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းသားနုနုလေး တွေ ထိခတ်ရုံလေးနမ်းတာ၊ အာသာဆန္ဒပြင်းပြစွာ နမ်းတာတွေရဲ့ ဖြစ်တည်ရာ အစိတ်အပိုင်းလို့လဲဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ မိမိ ကိုယ်တွင်းကို အစားအသောက်၊ ရေ၊ဆေးတွေသာမကာ တစ်ခုခုကိုသွပ်သွင်းတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခါပြောပြချင်တာက အဆိုပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပါးစပ်အာခံတွင်းကိုအသုံးပြုပြီး လိင်မှုကိစ္စပြုလုပ်ခြင်းအကြောင်း အလေးပေးပြော လိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်သူတို့ အာရုံထဲမြင်ယောင်ကြည့်ဖို့ ဥပမာလေးတစ်ခုပြောပြမယ် ရေခဲချောင်းကိုသိတယ်ဟုတ် အရသာတစ်ခု ခုထည့်သွင်းထားတဲ့ ရေခဲချောင်းကိုလေ။ အဲဒါလေးကို ငုံစုပ်ပြီး စားသောက်တဲ့ ရေခဲချောင်းစားသူတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားမှုကဘယ်လိုများ ပါလိမ့်။
ဘီယာကိုတော့ အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးရော ကျွန်တော်တို့လို ဟိုမိုများရော သောက်တတ်ကြတယ်ဆိုတာ အသိပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ မကြိုက် တတ်သူများကတော့ ဘီယာဆိုတာ နွားတစ်ကောင်ရဲ့သေးနဲ့တူပါသတဲ့။ ဘီယာကြိုက်သူ များကဘီယာသောက် မကြိုက်သူများက နွားသေးလို့ထင်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့လောကမှာလဲ ပါးစပ်ကိုသုံးပြီး လိင်ဆက်ဆံကြခြင်းဟာလည်း ထိုနည်းအတိုင်းထင်မြင်စရာပါ။
အခုအချိန်ထိ ကုသနိုင်မယ့်ဆေးမရှိသေးတဲ့ အေ့စ်ရောဂါဟာ ပါးစပ်နဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုပြုသူများမှာလည်း ကူးစက်နိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုတာ သတိထားရပါမယ်။ သွားတိုက်တံနဲ့မသိမသာထိမိလို့ ပွန်းပဲ့နေတာလေးတွေ၊ လျှာကွဲတာ၊ အရိုးကိုက်မိလို့ပြတ်ရှထားတာ စတဲ့ တစ်ခုခုသောအခြေအနေမှာ သတိမထားမိခင်လေး HIV ပိုးရှိသူရဲ့ သုက်ရည်၊သွေးပါးစပ်ထဲရောက်ရှိမိပါက တစ်ခါဆိုတစ်ခါ ရောဂါကူးစက်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်စိတ်ထဲလုံခြုံစိတ်ချရမှုအခြေအနေကိုမခံစားရတဲ့အချိန်မှာ ပါးစပ်ကိုသုံးပြုလိင်မှုကိစ္စ ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင် ကွန်ဒုံးလေးကို စွပ်ပေးပြီးမှပြုလုပ်လိုက်ကြပါလို့ပြောချင်ပါရဲ့နော်။
စာဖတ်သူ ညီလေးတို့လည်းသိမယ်ထင်တဲ့ ဘန်းစကား(ကီး)ကိုအသုံးပြုပြီးရေးသားသွားပါ့မယ် စာရေးရာမှာမထောက်ဘဲ ဖတ်သူလည်း သိမယ်ထင်လို့ပါပဲ။
ပါးစပ်သုံးပြီးလိင်မှုကိစ္စပြုလုပ်ခြင်း (Oral Sex)
လူတစ်ယောက်ဟာ သူတစ်ပါးကိုကီးပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် သူတစ်ပါးက ကီးပေးတာကိုပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ကြိမ်လောက်တော့ ပြုလုပ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ ကြဖူးတာကြီးပါပဲ။ ကီးတဲ့ကိစ္စဟာက စအိုဝကိုသုံးပြီးလိင်ဆက်ဆံတဲ့ကိစ္စလို ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာ နေရာရွေးတာ ပုံစံအနေအထားက ဘယ်လိုမှဆိုတာတွေ သိပ်မလိုပဲ ကိစ္စပြီးမြောက်အောင်လုပ်နိုင်တာကြီးပါ။ ကျွန်တော်အလေးပေးပြောသွားမှာက အကီးခံသူများအတွက် မဟုတ်ဘဲ ကီးပေးတဲ့သူတွေအတွက် အရေးပါမယ့် အချက်သုံးချက်ပါ။ အဲဒါတွေကတော့ -
(၁) ထိန်းချုပ်ခြင်း (Control)
(၂) သက်သောင့်သက်သာရှိခြင်း (Comfort)
(၃) တုန့်ပြန်ချက် (Feedback!)
အားလုံးမပြောခင် ပထမဆုံးပြောချင်တာက သူတစ်ပါးကို အကောင်းမွန်ဆုံးကီးပေးနိုင်ဖို့ဆိုရင် ကိုယ့်မှာ အတွေ့အကြုံနည်းနည်းရှိပေ မယ့်လို့ ကီးပေးတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်မှာ သင့်အနေနဲ့ နည်းနည်းလေးထိန်းချုပ်မှုရှိဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ်လိုအပ်တဲ့အချိန် အသက်တစ်ချက် ရှူဖို့ ရပ်တန့်နိုင့်မယ်၊ ကိုယ် ကီးပေးတဲ့ အရှိန်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်မယ့်ထောင့်တွေကို စဉ်းစားပြီးရင် ကိုယ့်ပါတနာကို အိပ်ယာတစ်ခုပေါ် လှဲအိပ် မလား၊ ကုလားထိုင်တစ်လုံးပေါ်မှာထိုင်မလား သို့မဟုတ် အလားတူအနေအထားတစ်ခုခုကို အဆင်ပြေမလားမေးကြည့်လိုက်ပါ။
ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနဲ့ သက်သောင့်သက်သာအနေအထားတစ်ခုရောက်ပြီဆိုရင် ပါတနာရဲ့လိင်တံ နှင့် ကိုယ့်လည်မျိုအဆင်ပြေစေမယ့် ထောင့်အနေအထားရဖို့ကြိုးစားပါ။ တကယ်လို့ သူ့လိင်တံက အပေါ်ကို နည်းနည်းကော့တက်နေတယ်ဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ကတော့ 69 position လေးက အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ (ဒါက သူ့ပေါင်နှင့် ကိုယ့်ဦးခေါင်းရှိရာဘက်ကိုခွထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတော့ သူ့ဟာက ဘယ်ဘက်ကိုကောက်လား ညာဘက်ကိုယိမ်းသလား သဘောကျအထုတ်အသွင်းအဆင်ပြေစေတာကိုးနော်)
ကီးတဲ့အနေအထားမှာလည်း သူ့အတွက် အဆင်ပြေပြေသက်သောင့်သက်သာဖြစ်ဖို့ကြီးပဲမစဉ်းစားဘဲ ကိုယ့်အနေနဲ့ကော သက်သောင့် သက်သာဖြစ်ရဲ့လား ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ သင့်လက်နှင့် သူ့လိင်တံအရင်းနားကို ခိုင်ခိုင်မာမာဆုပ်ကိုင်ထားရ ပါမယ်။ သူ့ ပစ္စည်းက အတော်တုတ်တယ်ဆိုရင် လက်မနှင့် လက်သန်း၊လက်သူကြွယ် သုံးချောင်းနှင့်ထိန်းရုံသဘော အသာညှပ်ကိုင် ရမှာပေါ့နော်။ တစ်နည်းပြောရရင် လက်သီးဆုပ်ကိုအတင်းကြပ်ကြပ်ဖျစ်ညှစ်ကိုယ်တွယ်တာမျိုးမလုပ်ရပါဘူး။
နောက်တစ်ခါ သူ့လိင်တံကို ကိုယ့်အာခံတွင်းထဲတစ်ကြိမ်သွင်းတိုင်း သွင်းတိုင်း အသက်ပုံမှန်ရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်ဖြစ်ရဲ့လား သတိထား သင့်ပါတယ်။ အသက်ကိုပုံမှန် ရှူသွင်းရှူထုတ်ဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် သင့်အတွက် ဒီကိစ္စဟာ သက်သောင့်သက်သာမဖြစ်ဘဲ ၀န်ထုပ် ၀န်ပိုးအသွင်ဖြစ်စေနိုင်ပါရဲ့။
အလားတူ သူ့အတွက်လည်း အဆင်ပြေပြေ သက်သောင့်သက်သာနှင့် ခံစားမှုအရှိန်မြင့်စေဖို့ ပြုလုပ်ရာမှာ မမေ့သင့်တဲ့ ခပ်ရိုးရိုး စည်းမျဉ်းလေးနှစ်ခု ရှိနေပါတယ်။
No teeth - နှုတ်ခမ်းတွေကို သွားတွေအပေါ်ဖုန်းထားတဲ့သဘောမျိုး မဟုတ်ဘဲ သွားတွေနှင့်ထိခတ်တဲ့အနေအထားမျိုးနှင့် ခပ်ပြင်းပြင်း စုပ်မျိုတာဟာ အကီးခံသူအတွက် သာယာမှုမဖြစ်စေဘဲ နာကျင်မှုကိုသာဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ ပါးစပ်ထဲကို ခပ်ပြင်းပြင်းအထုတ်အသွင်း လုပ်စုပ်မျိုတာ၊
Sensitive - လိင်တံအရေပြားတင်းကြပ်နေတဲ့သူ၊ ပွန်းရှထားသူတစ်ယောက်အတွက်တော့ အတော်ပြဿနာရှာတဲ့အချိန်ပါပဲ။ သိပ်မလိုအပ်ဘဲ ပွတ်တိုက်ကိုင်တွယ်တာမျိုးကို သူတို့ကြာကြာမခံစားနိုင်ကြပါဘူး။ ဒါကိုတော့ သတိထားကြည့်ပြီးကိုင်တွယ်ရမယ့် အရာဖြစ်ပါတယ်။
တုန့်ပြန်ချက် တုန့်ပြန်မှုပေးတာ လက်ခံတာက အလွယ်ကူဆုံး အစိတ်အပိုင်းလေးတစ်ခုပါ။ သင့်ပါတနာကို ပြောလိုက်တာ သို့မဟုတ် သင့်ပါတနာရဲ့ပြောကြားချက်ကိုနားထောင်လိုက်ရုံပဲမဟုတ်လား။ သင် ညည်းငွေ့လာတာ သို့မဟုတ် နွမ်းလျလာတယ်ဆိုရင် သူ့ကို သိစေလိုက်ပါ။ ပြီးတော့ သင်လုပ်ဆောင်ချက်က သူ့အတွက်ကောင်းမွန်ရဲ့လားဆိုတာကိုလည်း မေးမြန်းသင့်ပါကြောင်း။
လည်မျိုထဲထိ….. (Deep Throat……Gagging)
သင့်ပါတနာရဲ့ လိင်တံကို လည်မျိုနောက်ပိုင်းလမ်းကြောင်းထဲထိ ထည့်သွင်းခွင့်ပြုတာကို Deep Throat လုပ်နေခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့လိင်တံခေါင်းကို သင့် လျှာအရင်းပိုင်းနှင့် လည်မျိုနောက်ပိုင်းထဲထိ ဖိသွင်းတဲ့အားရယ် လျောသွင်းလျောဝင်တဲ့ခံစားချက်ရယ်တွေ ဟာ သူ့အတွက် လေဟာနယ်ထဲမျောစေတဲ့ခံစားမှုတွေဖြစ်တည်စေမှာပါ။ သင့်အနေနဲ့ အလေ့အကျင့်မရှိသေးဘူးဆိုရင် သည့်လည်မျို ဟာ သဘောသဘာဝအတိုင်း သင့်အဆုတ်ထဲတစ်ခုခုမ၀င်နိုင်ဖို့အတွက် ပြန်ပိတ်ဖို့အလိုလိုကြိုးစားပါလိမ့်မယ် - gagging။ သီးသလိုလို ဖြစ်တဲ့ Gagging ဆိုတာဟာ သင့်လည်မျိုထဲတစ်ခုခုပိတ်ဆို့တဲ့အခါ အသက်ရှူခွင့်ရဖို့လုပ်ဆောင်တဲ့သာမန်တုန့်ပြန်မှုလေးတစ်ခုသာ ဖြစ်တာကြောင့် သင့်အနေနဲ့သိပ်ပြီးမစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင် စိတ်ပျက်လက်ပျက်မဖြစ်ပါနဲ့။ တစ်ခြားအရာတွေလိုပါပဲ Practice makes Perfect!
ကဲပါ…သတိရနေဖို့က သင့်အနေနဲ့ Deep Throat လုပ်ဆောင်ဖို့ ယုံကြည်မှုမရှိဘူး သို့မဟုတ် သက်သောင့်သက်သာမဖြစ်ဘူးလို့ ခံစားရရင် ငြင်းဆန်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးပေါ့နော်။
Alex Aung (28 October 2012)
Posted by Alex Aung at 6:42 PM 1 comment:
စိတ်မောလူမောဖြစ်နေဟန်တူတဲ့ “မြတ်သူ” ကျွန်တော့်နံဘေးက မြက်ခင်းပေါ်လှဲတစ်ဝက်ထိုင်တစ်ဝက်ပုံစံထိုင်နေတာကိုကြည့်ရင်း ကျွန်တော် ခံစားနေရတဲ့ သောကတွေ ဘယ်ရောက်ကုန်မှန်းမသိပါ။ ထိုင်နေတဲ့ ကျွန်တော် အသာထကာ သူ့ရင်ခွင်ထဲ လှဲလျောင်း လိုက်ပါတယ်။ “ငါ ဒီအချိန်မျိုးလေးကို စောင့်နေခဲ့ရတာ တော်တော်ကြာနေပြီ”
လို့ပြောလိုက်တော့ နုနုညံ့ညံ့ မြက်ပင်တွေကျွန်တော်တို့ ကိုယ်ခန္ဓာတွေကို တို့ထိရင်း ထောက်ခံကြောင်းပြဆိုပါတယ်။ မြတ်သူက ကျွန်တော့်ဆံပင်လေးတွေကို ပွတ်သပ်တာကလွဲပြီး ဘာမှ ဆက်မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ သူ့လက်မောင်းတွေ၊ ပါးပြင်တွေ၊ ရင်အုပ်ပေါ်က မွှေးညှင်းနုနုတွေကို ပွတ်သပ်ပေးမိတဲ့ ကျွန်တော့်လှုပ်ရှားမှုမှာ ကြက်သီးထတဲ့အထိ သူ့ခန္ဓာကိုယ်က မသိမသာလှုပ်နေပါရဲ့။ ဒီလိုပြုမူမှုမျိုးကို သူမှ မခံစားခဲ့ဘူးတာလေ။ စိတ်အားထက်သန်မှု နှင့် တောက်ပနေတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အညိုရောင်မျက်ဝန်းတွေကို သူစိုက်ကြည့်နေတယ်။ သူ့ကိုကြည့်ရတာ အသစ်အဆန်းတစ်ခုကို အခုမှ ရင်ခုန်ဖူးသလိုမျိုးပေါ့နော်။
တစ်စုံတစ်ခုက သူ့ကိုဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုတွေပေးလာသလိုမျိုးလည်း ဖြစ်လာဟန်ပါ။ အမျိုးသားတစ်ယောက်က သူ့ကိုဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှ မတို့ထိခဲ့ဖူးတာ။အရင်တုန်းက ကျွန်တော့်ကိုပြောဖူးတယ် သူ့ကို အမျိုးသားတစ်ယောက်ယောက်က ကျွန်တော်ပြုမူသလိုမျိုး သူ့အပေါ် ဆက်ဆံလာခဲ့ရင် သက်သောင့်သက်သာမဖြစ်ဘူး၊ မလုံမခြုံသလိုမျိုး၊ ပြီးတော့ နည်းနည်းလည်း မလွယ်သလို ခံစားခဲ့ရပါ တယ်တဲ့။ အခု ကျွန်တော်လုပ်မိတာလေးတွေကို အသာရပ်ကာ သူ့မျက်ဝန်းတွေကို စိုက်ကြည့်တော့လည်း အရင်နဲ့မတူ တအံ့တသြ ကျေနပ်နှစ်သိမ့် ကြည်နူးမှုတွေနှင့် တလက်လက်တောက်ပနေပါတယ်။ အရာအားလုံး သက်သောင့်သက်သာဖြစ်စွာ သဘာဝကျကျ ခံစားရဟန်တူသား။ သေချာတယ် He was in Love!
ကျွန်တော် လေပြည်ညှင်းတွေက ပါလာတဲ့ မိုးနံ့ကိုလည်း သတိမထားမိ၊ ခပ်ဝေးဝေးက မကြားတကြား ခွေးဟောင်သံကိုလည်း မလန့်မိ တော့လောက်အောင် သူ့မျက်ဝန်းတွေထဲ မျောပါနေမိပါတယ်။ စိတ်ကူးတွေထဲမှာပါ အိပ်မက်ခဲ့ရသော ကျွန်တော့်အချစ်ဆုံးသူလေးဟာ ကျွန်တော့် နံဘေးမှာလေအခု။ ဒီတော့ဘယ်တုန်းကမှ မခံစားခဲ့ရဖူးသေးတဲ့ပျော်ရွှင်မှုမျိုးဟာ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာလည်း တလှပ်လှပ်ပါ။ ကျွန်တော် သူ့ကို အသာထွေးဖက်ထားရာက နွေးထွေးတဲ့ သူ့ပေါင်တံကြားဝင်လှဲလိုက်ကာ ကျစ်ကျစ်ပါအောင်သူ့ကိုယ်ကြီးကိုဖက်လိုက် တယ်။ ပြာလဲ့လဲ့မျက်ဝန်းအစုံဟာ ကျွန်တော့် မျက်လုံးတွေကို တစ်မျိုးတစ်မည်ကြည့်လာသလိုပဲဗျ။
ကျွန်တော်တို့ နှစ်ဦးသားရဲ့ နွေးထွေးနေတဲ့ခံစားချက်အတွေ့အထိဟာ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ မြတ်သူရဲ့ ဖြစ်တည်မှုအားလုံးကို လှစ်ဟဖွင့် ထုတ်ခွင့်ပြုလုပ်လိုက်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဆို ကျွန်တော့်ပေါင်တစ်ခြမ်းနှင့် ထိကပ်နေတဲ့ သူ့ပေါင်ခွဆုံက အထုပ်အထည်ကြီးဟာ လှုပ်ရှားထကြွလာပြီး ခပ်မာမာအသားချောင်းတုတ်တုတ်ဟာ ထောင်ထလာပါရော။ ကျွန်တော် သူ့မျက်နှာကို မော့ကြည့်တော့ သူ့မျက်ဝန်းတွေက ရှိုးတိုးရှန့်တန့်နှင့် ကျွန်တော့်အကြည့်ကို တုန့်ပြန်ပါတယ်။ သိတာပေါ့ မြတ်သူ ဘာလိုချင်နေပြီဆိုတာကိုလေ။
ခပ်ထူထူလေးနှင့် နမ်းချင်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းကို ပန်းသွေးရောင်ထပြီး မသိမသာတုန်နေတဲ့ ခပ်ပါးပါး မြတ်သူရဲ့ နှုတ်ခမ်းကို ကျွန်တော် ထိကပ်လိုက်တယ်။ ခဏတော့ သူငြိမ်နေပြီးနောက်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့တပ်မက်မွတ်သိပ်စွာ နမ်းကြပါရော။ တစ်ယောက်နှုတ်ခမ်းသားတွေဟာ တစ်ယောက်နှုတ်ခမ်းသားတွေထဲမြှုပ်နေကြပါတယ်။ စက္ကန့်တွေကျော်ဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော် မျက်ဝန်းတွေကို ဖွင့်ကာ မြတ်သူကိုကြည့်လိုက်တာ သူကတော့ လျာကိုရှည်လျားစွာထုတ် ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းလွှာတွေထဲထိုးမွှေနေတုန်း။ မြတ်သူ့မျက်လွှာတွေပွင့်ဟပြီး ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေကို ပြန်စိုက်ကြည့်ချိန်မှာတော့ နှစ်ဦးသားရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ ပိုမာန်ပါလာကြပါ တယ်။ ပွတ်သပ်ခြင်း၊ ထိတွေ့ခံစားခြင်းစတာတွေကို ချစ်ခင်နှစ်သက်စွာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် လုပ်ဆောင်ပေးကြတယ်ဆိုရမှာ ပေါ့နော်။ နှစ်ယောက်သားရဲ့လက်အစုံဟာ အပြန်အလှန် အလုပ်ရှုပ်ကြပါရဲ့။ မျက်ဝန်းတွေဟာ ပြန်လည်မှေးမှိတ်မိတော့ မြတ်သူရဲ့ လက်အစုံဟာ ကျွန်တော့်တင်ပါးအစုံကို ဖျစ်ညှစ်လာပါတယ်။ ကျောပြင်ထဲဝယ် စိမ့်ကနဲ ခံစားလိုက်ရသလိုပါပဲ။ ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားမှ မထိန်းနိုင်စွာ ညည်းတွားမိပါတယ်။ “God! မင်းကို ငါချစ်လိုက်တာ”
“ဟားဟား…ငါသိတယ်လေ” မြတ်သူက စနောက်တဲ့သဘောပြန်ပြောရော။ “အခုတော့ ပါးစပ်လေးကိုပိတ် ငါနမ်းသလို ခပ်ကြမ်းကြမ်း လေး နမ်းစမ်းပါကွာ” ကျွန်တော်နမ်းရှုံ့တတ်တာက နုနုညံ့ညံ့ ထိခတ်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ သူကတော့ မွတ်သိပ်တပ်မက်စွာ နမ်းရှုံ့ခြင်းကို ကျွမ်းကျင်တာပါ။ ကျွန်တော် သူ့လှုပ်ရှားမှုနောက်ကိုလိုက်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် သူ့လိုပဲ ခပ်ပြင်းပြင်းအနမ်းတွေကို ပေးဖြစ်ပြန်တော့ မြတ်သူက ပိုမိုတက်ကြွလာတာကြောင့် နှုတ်ခမ်းသားများဟာ ပူနွေးနေရပါတယ်။ နှစ်ဦးသားရဲ့ မိန်းမောသံတွေဟာ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေ မာတောင်ပြီး တွန်းထိုးမိတာနှင့် တစ်ပြိုင်တည်းလိုလိုပါ။ တပ်မက်မှုတွေပြိုင်တူဖြစ်နေကြတာသေချာပါတယ်။ မြတ်သူက ဘေးကိုနည်းနည်းစောင်းလိုက်ပြန်တော့ ကျွန်တော့်ငပဲခပ်ရှည်ရှည်ဟာ သူ့ငပဲထွားထွားကြီးနှင့် တွန်းထိုးဖိကပ်မိကြတယ်။ ဘာမှန်းမသိ နှုတ်ခမ်းသားတွေ ပြန်လည် ဖိကပ်မိကြပြီး အနမ်းမုန်တိုင်းထန်ကြတာပေါ့နော်။ ရုတ်တရက် မြတ်သူက ကျွန်တော့်တင်သား ဆိုင်တွေကို ငြင်ငြင်သာသာဆွဲကိုင်ပြီး စတင်ပွတ်သပ်ပြန်တယ်ဗျ။
ကျွန်တော့်အာခေါင်တွေခြောက်သွေ့ကာ ရေငတ်သလိုဖြစ်လာပြီး ပေါင်ကြားက ငပဲကလည်း မာသထက်မာလာတော့တာပါ။ မြတ်သူဒီထက်ပိုပြီး မထိန်းနိုင်တော့ဘူးထင့် ကျွန်တော်ကို မြေပြင်ပေါ် ပက်လက်ဖြစ်စေပြီး သူက အပေါ်ကမိုးကာ ကျွန်တော့်ကို ရင်ခြင်းအပ်သည်လေ။“ငါ ဒီအရွယ်ထိ ဘာကြောင့်ဒီလိုခံစားမှုမျိုး မရဖူးတာလဲ မသိဘူး၊ ရင်တွေအရမ်းခုန်တယ်” မြတ်သူက ခပ်တုန်တုန်အသံနှင့်စကားဆို တယ်။ “မင်းက အရမ်းစွဲဆောင်အားကောင်းတာပဲ ဘိုဘို”
“ဟားဟား……လျှောက်ပြောနေ၊မင်းကမှ ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းဆီခိုင်လေ” အပေါ်ကမိုးပြီးကြည့်နေတဲ့ သူ့မျက်ဝန်းတွေဟာ အရည် တလဲ့လဲ့ နှင့်။နှုတ်ခမ်းသားတွေကလည်း စိုစွတ်နီမြန်းလို့ပါ။ နှစ်ဦးသားအကြည့်တွေငြိပြီးငြိမ်နေတဲ့ခဏ မြတ်သူရဲ့လက်တွေက ကျွန်တော့်ခါးစပ်က တီရှပ်ကိုဆွဲကိုင်ပြီး ကျွန်တော့်ခေါင်းပေါ်ကတစ်ဆင့်ချွတ်တယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ လက်မတုန်ဘဲ ခပ်မြန်မြန်ဖြစ်နေရဲ့။ အ၀တ်တွေအားလုံး ချွတ်ဖယ်ကာ မြက်ခင်းတွေပေါ် ပစ်ချလိုက်တယ်။ မြတ်သူက ကျွန်တော့်လည်ဂုတ်ကိုကုန်းပြီးနမ်းကာ တဖြည်း ဖြည်းနှင့် သူ့နှုတ်ခမ်းတွေဟာ ပန်းသွေးရောင် ကျွန်တော့်နို့သီးခေါင်းတွေဆီ ဖွဖွထိတာ ကြက်သီးများတောင် ထမိပါတယ်။ ပူနွေး စိုစွတ်တဲ့ သူ့လျှာဖျားလေးဟာ ကျွန်တော့်နို့သီးခေါင်းတွေကို ရစ်ဝိုက်ပြီးခပ်မျှဉ်ှးမျှဉ်းစုပ်တာများ ကျွန်တော့်ကျောပြင်တောင်ကော့သွား မိတယ်။ မျက်နှာတွေမှာ အပြုံးကိုယ်စီနှင့် ဖြတ်သန်းသွားတဲ့ စက္ကန့်တိုင်းကိုသာယာနေကြတာပေါ့နော်။ မာတောင့်နေတဲ့ ကျွန်တော့်နို့သီး ခေါင်းတွေကို သူ့လျှာကြီးနှင့် ရစ်ဝိုက်လျက်ပြုလိုက်တိုင်း ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားက ညည်းသံထွက်ထွက်သွားတာ ဘယ်သူမှ မရှိတဲ့ လယ်တောထဲမှာမို့တော်တော့တယ်။
"Ohh....Ohh....အဲဒီဖီလင်က အရမ်းမိုက်တာပဲ...အာ" ကျွန်တော့်ပါးစပ်ကကိုထုတ်ပြောလိုက်တာ အသံတောင်ကျယ်သွားသလားပဲ။ ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားက အသံတွေ၊ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ကိုယ်ဟန်အမူအယာတွေဟာ မြတ်သူကို နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ အားပေးအားမြှောက် ပြုဟန်တူပါတယ် သူ့လှုပ်ရှားမှုတွေ ရဲတင်းလာတာပါပဲ။ ရုတ်တရက်လို မြတ်သူ လုပ်နေတာတွေတုန့်ရပ်သွားတာကြောင့် သူ့မျက်နှာကို ကျွန်တော်မော့ ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ သူသည်လည်း ကျွန်တော့်ကိုပြန်ကြည့်နေတာ ခပ်ရွံ့ရွံ့နဲ့ပါ။
"ဘာ....ဘာဖြစ်လို့လဲ မြတ်သူ" ကျွန်တော် ခပ်ကြောက်ကြောက် လေသံနှင့်မေးမိပါတယ်။ တစ်ခုခုမှားယွင်းပြုမူမိမှာကို ကျွန်တော်စိုးရိမ် တာ သူ့အပေါ်ကိုလေ။ မြတ်သူ မျက်နှာက ချစ်စဖွယ်အပြုံးတစ်ခုပေါ်လာကာ "ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး.....ငါမင်းကို ကလိထိုးနေသလို ဖြစ်နေ လားလို့' တဲ့ ညစ်ကျယ်ကျယ်ပြောတယ်။ "အော်ဟော်....စနဲ့ကွာ....စိုးရိမ်သွားတာပဲ ဘာဖြစ်တာလဲလို့"
"Oh, ကို တောင်းပန်တယ် ချစ်လေးရာ....အဲလို မရည်ရွယ်ပါဘူး" မြတ်သူ စကားအသုံးတွေနားထောင်ပြီး ကျွန်တော်ပြုံးမိရပါတယ်။ ကြားရတဲ့လေသံက အရာအားလုံးမီးစိမ်းပြပြီဆိုတာပါပဲ။
"အဟမ်း.....ငါဘာလုပ်နေပြီလဲ အခု?" ရယ်ကျဲကျဲနှင့် ကျွန်တော့်ကိုမေးရဲ့။
"မင်း ငါ့ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကိုထိတွေ့နေပြီလေ ဟုတ်ဘူးလား" ကျွန်တော်မြှူဆွယ်သလို စကားထောက်လိုက်တယ်။
"အဲလိုမင်းကထင်တယ်ပေါ့လေ? မင်း-ီးကလည်း...မာ...မာပြီးတောင့်နေတာပဲ...ဟင်း" မြတ်သူက ဟာသလုပ်တယ် ကျွန်တော်တို့ ပေါင်းသင်းဆက်နွယ်မှု အစိတ်အပိုင်းတွေထဲဘယ်အရာက ပိုမိုသစ်ဆန်းပျော်ရွှင်စေကြောင်း သူရှာဖွေမိရင်းပေါ့နော်။
"ဒါဆို ငါမတ်တပ်ရပ်ပြီး မင်းပါးစပ်ကို မုဒိန်းကျင့်ရမလားပြော?" သူက ရယ်ရယ်မောမောနှင့်မေးတယ်ဗျ။
"စိန်လိုက်လေ ဘော်ဒါကြီး" ကျွန်တော်လည်း ရယ်ရယ်မောမောနှင့် ပြန်ပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်။
တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် ဘယ်သူက အားသန်တယ်ဆိုတာ ပြိုင်ဆိုင်တဲ့သဘော နှစ်ဦးသား လုံးထွေးနပန်းသတ်ကြတာမှာ အဆုံး သတ်တော့ ကျွန်တော်အနိုင်ရတယ် "မြတ်သူ" ကိုမြေပြင်မှာ ကျောနှင့်ပက်လက်လှန်ပြီးကပ်ထားတဲ့အခြေအနေထိပေါ့။ နှစ်ဦးသားလုံး ထွေးနေတာ ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိ ခဏတာရပ်တန့်သွားကာ မျက်ဝန်းခြင်းငြိတွယ်မိကြပါတယ်။ ကျွန်တော် သူ့တီရှပ်ကို ခေါင်း ပေါ်ကနေ ဆွဲချွတ်ပေးပြီး မြက်ခင်းပေါ်ပစ်တင်လိုက်တာ ကျွန်တော့်အ၀တ်တွေနှင့် မလှမ်းမကမ်းမှာရောက်သွားရော။ ခပ်ဟဟနှင့် ငံ့ လင့်နေတဲ့ သူ့ပါးစပ်ရဲ့အနားသတ် နှုတ်ခမ်းသားတွေကို ကျွန်တော်မွတ်သိပ်စွာ ငုံ့နမ်းလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ချစ်သူလေးရဲ့ အနမ်း အရသာကို စမ်းသပ်ပြန်ခြင်းလို့ပြောရမလားဘဲ။ ကျွန်တော် သူ့မေရိုးခိုင်ခိုင်ကြီးကို တစ်ချက်နမ်းတယ်၊ ပြီးတော့ လည်တိုင်....ပြီးတော့ ရင်အုပ်မို့မို့မောက်မောက်စီကို ခပ်ဖွဖွအနမ်းပေးတယ်ပေါ့။ နို့သီးခေါင်းလေးတွေဆီ အရောက်မှာတော့ နေရာထပ်မရွေ့တော့ဘဲ လျှာနှင့် နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ရစ်ဝိုက်ကလိပါတယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်တွေက အနမ်းလေးတွေနှင့်တင် မကျေနပ်နိုင်တော့ဘဲ တခြားပိုပြီး လိုချင် မိလာရော။ ကျွန်တော် ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုတွေပြင်းထန်လာသလိုပဲဗျာ။ ခဏနေတော့ အနမ်းကြောကို တဖြည်းဖြည်း အောက်ပိုင်းကို ရွှေ့လိုက်တယ်။ ပန်းပုထုထားသလိုပေါ်နေတဲ့ ဗိုက်ကြွက်သားတုံးတွေရဲ့အလယ် ချက်ပေါက်လေးထိလေ။ ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး သူ့ ဗိုက်သားတွေကို ကျွန်တော်နမ်းတယ်၊ လျှာနှင့် အပြန်အလှန် လျက်ပြုမိတယ်။
"အား.....ငါ့ကို ဆက်ပြီး မကလိနဲ့တော့ကွာ....ငါ့စိတ်တွေ သောင်းကြမ်းလာရင် မင်း....အား" မြတ်သူတစ်ယောက် ကတုန်ကယင် အသံ နှင့် ကျွန်တော့်ကိုတားတယ်။ သူဘာပြောပြော ကျွန်တော်မကြားဟန်ပြုကာ ဆက်လုပ်တာပေါ့နော်ခဏတော့။ ဘယ်လိုပဲပြောပြောလေ ကျစ်ကျစ် လစ်လစ် ဗိုက်သားများကို ကျွန်တော်ကလိနေတာတော်လောက်ပြီ...။ အင်း.....ဗိုက်သားတွေ နှုတ်ခမ်းသားနှင့် အနမ်းမွှေနေ တာကို ရပ်တန့်လိုက် ပါတယ်။ကျွန်တော့်လက်တွေက နုညံ့တယ်လို့ပြောတဲ့ သူ့ပေါင်ခွဆုံကိုနေရာရွှေ့လိုက်တာ အမလေး.... မာလိုက် တဲ့အသားချောင်းကြီး ဘောင်းဘီထဲက ပေါက်ထွက်တော့မယ့်အတိုင်းပဲဗျာ။ ဘောင်းဘီဇစ်ကို မှန်းသမ်းစမ်းလိုက်ပြန်တော့ အေးစက်နေ တဲ့ ဇစ်ခေါင်းကို အောက်ခြေနားမှာ စမ်းမိရတယ်။ တုန့်နှေးမှုမရှိ ခပ်မြန်မြန်ဆွဲဟလိုက်တာပေါ့။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့် ချစ်သူငယ်ချင်းလေး ရဲ့ ခါးပတ်ကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်။ ရင်ခုန်သံတွေကတော့ ပိုပိုမြန်လာတာတော့အမှန်ပါ။ ဇစ်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲဖွင့်လိုက်ကာ မြွေဟောက်ကြီးကို လွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်တော့ ခပ်ပါးပါး boxer ဘောင်းဘီတိုနှင့်အတူ ပြေးထွက်လာတယ်။
ကျွန်တော်လုပ်နေတာကိုရပ် မြတ်သူ့မျက်ဝန်းကို တိုက်ရိုက်ကြည့်လိုက်တယ်ဗျ။ ဒီတစ်ခါတော့ ဆွဲငှင်တဲ့ တပ်မက်တဲ့ အကြည့်မျိုးတွေနှင့် ကြည့်မိရတာပေါ့နော်။ မြတ်သူရဲ့ငပဲဟာ မြွေဟောက်တစ်ကောင်လို ဟိုရမ်းဒီရမ်းနှင့် ကနေတာ စိတ်လှုပ်ရှားလာတာနှင့် ခေါင်းကိုငုံ့ကိုင်း ကာ စုပ်မျိုလိုက်ပါရဲ့။ အရင်က မခံစားဖူးတဲ့ မတွေ့ကြုံဖူးတဲ့ ဖီလင်မျိုး သူရရှိလာခြင်းပေါ့ သူ့အတွက်။ ပူနွေးသော.....စိုစွတ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်အာခံတွင်းက နုညံ့တဲ့အတွင်းခံက ခေါင်းပြူနေတဲ့ မြတ်သူ့ငပဲကို ပိုမိုမျိုချလိုက်တယ်။ မြတ်သူ့ နှုတ်ခမ်းက ခပ်ကျယ်ကျယ် အော်ညည်းသံက ရုတ်တရက်ဆိုသလို ပေါ်ထွက်လာတာက သူကြိုက်တယ်ဆိုတာကို ပြတာပါပဲ။ ခပ်တုန်တုန်ဖြစ်နေတဲ့ မြတ်သူ့ငပဲ ခေါင်းကို လျှာလေးနှင့် ဖိဖိပြီး ကလိတာ၊ ကွမ်းသီးခေါင်းလေးကိုပဲ တပြွတ်ပြွတ်စုပ်တာလည်း လုပ်မိသည်လေ။ အခုတော့ သေချာသွားပြီ ဗျာ ကျွန်တော့်ကို သူချစ်ခင်နှစ်သက်ပြီဆိုတာ။ ကျွန်တော် ခပ်ပါးပါး boxer ဘောင်းဘီအပေါ်ကနေ သူ့ငပဲကို မနာမကျင် ဖွဖွလေးကိုက် ပြုမိပါသောကြောင့် ဖြူဖွေးလှတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့သွားစွယ်များနှင့် မငြိမပြုအောင်လည်း ကြိုးစားရတာပေါ့နော်။ ဘောင်းဘီကြ တစ်ဝက် တစ်ပျက် ၀က်လက်စဆိုတော့ ကျွန်တော် ဘောင်းဘီခါးစပ်ကနေဆွဲကာ အောက်ကို ဖြည်းဖြည်းခြင်း ချွတ်ပစ်လိုက်တယ်။ မြက်ခင်းနုနု လေးတွေပေါ် ပက်လက်သဘောဖြစ်နေတဲ့ မြတ်သူတစ်ကိုယ်လုံး အ၀တ်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။ နှစ်ဦးသား ခဏတော့ ငြိမ်သွားမိကြသလို ပဲ ဘာမှဆက်မလုပ်ဘဲ ခဏတော့ငြိမ်သက်ဖြစ်ပါရဲ့။ ရင်ခုန်သံတွေ ပိုမိုမြိုင်ဆိုင်လာသလို ကျွန်တော်တို့ဘ၀မှာ စိတ်လှုပ်ရှားမှုအများဆုံး ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်မှာပါ။ ပိုမိုစောင့်ဆိုင်းဖို့ မလုပ်ချင်တော့ဟန် တူပါတယ်။ သူ့မျက်ဝန်းတွေကို ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော့်ပေါင်ခွဆုံက ခပ်ဖောင်းဖောင်း ဘောင်းဘီဖုဆီ အကြည့်ရောက်နေတယ်။ ကျွန်တော့်မျက်နှာ သူ့ပေါင်ခွဆုံကို မျက်နှာပြန်မအပ် ခင်မှာပဲ မြတ်သူက သူ့ခြေဗလာနှင့် မြေပြင်ပေါ် မတ်တပ်ရပ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ပခုံးကိုဆွဲထူကာ သူ့လိုပဲ မတ်တပ်ရပ်စေရော။
ကြီးမားအုပ်ဆိုင်းသော သစ်တောအလယ် ကျယ်ပြန့်သော လယ်ကွင်းတွေနဲ့ မနီးမဝေးမှာ မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းထက် ဖက်လဲတကင်းရှိနေ သော ချစ်စဖွယ်ကောင်လေးနှစ်ယောက် ဖြစ်တည်မှုကို ရုပ်ရှင်ထဲက scene တစ်ခုလို မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်စမ်းပါဗျာ။ တစ်ယောက် သောသူက တင်ပါးခပ်ဝိုင်းဝိုင်းတွေပေါ်တဲ့အထိ အတ၀်မဲ့ကာ၊ ကျန်တစ်ယောက်က အပေါ်ပိုင်းဗလာကျင်း အောက်ပိုင်းပေါင်ခွဆုံက မိုးကာတဲလိုဖြစ်နေရတာပေါ့လေ။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးပေါ် နေရောင်ခြည် တွေကတော့ ဖြာဆင်းလို့။
ကျွန်တော်တို့ တပ်မက်မွတ်သိပ်စွာ ပြန်လည် နမ်းမိကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အနမ်းပွဲက ရုတ်တရက် ပျက်ပြယ်သွားတယ် မြတ်သူက ဒူးထောက် ထိုင်လိုက်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ခါးပတ်....ဘောင်းဘီက ခါးပါတ်ကို လက်တုန်တုန်နှင့် သူဆွဲဖြုတ်တာမှာ ကျွန်တော်က ကူညီပေးလိုက်ရသေးတာပါ။ ခါးပါတ်ကိုဖြုတ်ပြီးပြန်တော့ ဘောင်းဘီကြယ်သီးတွေကိုတော့ သူကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ဖြုတ်တတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘောင်းဘီဇစ်ကိုဖြုတ်ဖို့ ချီတုံချတုံဖြစ်ပြီးမှသာ အဆုံးထိဖွင့်ချရော။ မြတ်သူ လက်အစုံလွှတ်လိုက်တော့ ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီတစ်ထည်လုံး မြက်ခင်းပေါ်ပုံကျသွားပါတယ်။ ဘောင်းဘီရှည်ကို ခြေထောက်တွေကဖယ်၊ ၀တ်ထားတဲ့ boxer အတွင်းခံကို ခပ်မြန်မြန်ပဲ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆွဲချွတ်လိုက်တယ် မြတ်သူရဲ့ တုန့်နှေးမှုကို မစောင့်နိုင်တော့ဘူးလေ။
"ဟား....ဟား....ဟား" မြတ်သူ့မျက်နှာမှာ မထိန်းနိုင်စွာ ရယ်မောမှုနှင့်အတူ သဘောကျမှုကအထင်းသား။ "ငါတို့နှစ်ယောက် မထိန်းနိုင် ကြတော့ဘူးထင်တယ်၊ ဟုတ်တယ်ဟုတ်?"
"ငါမထိန်းနိုင်တော့ဘူးလေကွာ....မင်းက အဲလိုဖြစ်အောင်လုပ်တာကိုး မြတ်သူရ"
မြတ်သူ့အပြုအမူတွေ အကြည့်တွေကလည်း မွတ်သိပ်တောင့်တမှု အသံနှင့်အတူ သူ့မျက်နှာနားမှာ ၀ံ့ကြွားကြွားရှိနေတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲ ကို စူးစမ်းတယ်ဗျ။
"Wow!" "မင်း-ီးကြီးလှချည်လား ဘိုဘို"
ကျွန်တော့်မျက်နှာမှာ ကျေနပ်ပြုံးနှင့်အတူ ကိုယ့်ငပဲကိုငုံ့ကြည့်မိတာပေါ့။ ကျွန်တော်ငပဲက မြန်မာထဲမှာ ထူးထူးခြားခြား ၇လက်မနီးပါး ရှည်ပြီးအတုတ်ကလည်း အားရစရာပါ။ ဒါ့အတွက် ကျွန်တော် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲဂုဏ်ယူမိနေတာပါ။ ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ အထူးခြား ဆုံး အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ဆုံးဖြတ်ထားမိတာကို အခုတော့ မြတ်သူမြင်သွားပြီလေ။ မြတ်သူ့မျက်လုံးတွေက အရောင်တောက်နေ တာကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် သူကြိုက်နေပြီ၊ တမေ့တမောကြီးကို သူပြုစုချင်နေပြီထင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ကိုယ်သူ straight တစ်ယောက်အဖြစ် လက်ခံ နေထိုင်ခဲ့တာ ဘ၀တစ်သက်တာဆိုတော့ ဘာဆက်လုပ်ရမည်မသိ ဖြစ်နေဟန်ပါပဲ။ ဘာမှဆက်မလုပ်ဘဲ ဒူးထောက်ထိုင် ငြိမ် သက်နေတဲ့ မြတ်သူကို ငုံ့ကြည့်မိပြီး ကျွန်တော်လည်း နေရာမရွှေ့မိ။
"ဘာမှမဖြစ်....ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး......ငါ.....ဘာလုပ်ရမလဲ မသိ" ဘယ်လိုအလန့်တကြားခံစားနေရတဲ့ ခံစားမှုမျိုးလည်းဆိုတာ ကျွန်တော် စာနာသိရှိမိပါတယ်။
"ဒါ...ဒါလုပ်ရမှာ ငါ့အတွက် အသစ်ဖြစ်နေတယ်ကွ"
"ဟား...ဟား အိုကေ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ငါပြရမယ်ထင်တယ်" ကျွန်တော်အားရပါးရပြုံးရင်း ရယ်မောလိုက်မိပါရဲ့။ကဲ...အချိန် မဆိုင်းဘဲ သူ့ကိုမတ်တပ်ရပ်ခိုင်းကာ ကျွန်တော်က ဒူးထောက်ထိုက်လိုက်တယ် သူ့ရှေ့မှာပေါ့နော်။ မြတ်သူရဲ့ မျက်လုံးတွေကို မော့ ကြည့်တော့ ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေကို ပြန်စိုက်ကြည့်ပြန်ရော။ ဒါပေမဲ့ သူ့မျက်ဝန်းတွေမှာ စိုးရွံ့ထိတ်လန့်မှုတွေက မဖုံးနိုင်မဖိနိုင်။ ကျွန်တော် သူ့မျက်ဝန်းညိုတွေကို ပြန်စိုက်ကြည့်ပြီး ပြုံးမိရပါတယ်။
"မြတ်သူ.....မင်းဆက်မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင် ငါတို့ရပ်လိုက်လို့ရတယ်နော်၊ ငါ မင်းကိုတကယ်ချစ်တယ်။ မင်းမလုပ်ချင်တာကို ငါအတင်း အကြပ်မတောင်းဆိုပါဘူး"
မြတ်သူ ခဏငြိမ်သွားပြီး သူ့မျက်ဝန်းတွေက မြက်ခင်းပြင်ကို တွေတွေဝေေ၀ ငေးနေပြန်တော့ သူ့စိတ်သူ သံသယရှိနေဆဲထင်ပါတယ်။
"အိုကေ...မြတ်သူ၊ မင်းလန့်နေတာကို ငါမြင်နေရတယ်။ မင်းအသင့်မဖြစ်သေးရင် ငါတို့အချိန်နည်းနည်းစောင့်ကြတာပေါ့"
"မဟုတ်ပါဘူး......ငါလုပ်ချင်ပါတယ်....ငါ...နည်းနည်းလန့်နေရုံလေးပါ ဘိုဘို။ ဒီလိုမျိုး ငါတစ်ခါမှ မလုပ်ခဲ့ဖူးဘူးလေ အရင်က"
တစ်ချက်ပြုံးတိုင်းအသက်ရှည်ရလျှင်တော့ ကျွန်တော့်ပါးပြင်မှာ ပါးချိုင့်တွေပေါ်လာတဲ့အထိ ပြုံးရယ်မိနေရတာက ပိုပိုပြီးတော့ကိုအသက် ၀င်မယ်။ ကျွန်တော် သူ့ပါးပြင်ကို အမြတ်တနိုးနမ်းလိုက်ရင်း "မြတ်သူ..... ကြောက်ဖို့မလိုပါဘူးကွာ၊ တစ်နေရာရာကျမှ စကြတာပေါ့။ ငါ နားလည်ပါတယ် မင်းခံစားနေရတဲ့ အခြေအနေကို ကျော်ဖြတ်ဖို့ဘယ်လောက်ခက်တယ်ဆိုတာ။ မင်းသိပါတယ် ငါ့ကို ယုံကြည်နိုင်တယ် ဆိုတာကိုလေ၊ မင်းလည်း ငါ့အကြောင်းသိသလို ငါ မင်းကိုဘယ်တော့မှ နာကျင်မှုမပေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း၊ မင်းကို ငါ အရမ်းချစ်တယ် မြတ်သူ"
"ငါလည်း မင်းကို ချစ်တာပဲ ဘိုဘိုရာ"
"ငါ ဘာကြောင့် ထိတ်လန့်စိတ်ဖြစ်နေတယ်မသိဘူး၊ နည်းနည်း ဂေါက်သွားလို့ဖြစ်မယ် ဟဲဟဲ"
ကျွန်တော်တို့ စကားမဆိုဘဲ မျက်ဝန်းခြင်းတွယ်ငြိ ငြိမ်သက်နေမိကြတယ်။ ပျော်ရွှင်ခြင်း တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် ချစ်ခြင်းမြစ်ထဲ ပျော်ဝင်ခြင်းတွေနှင့်အတူ ဖက်တွယ်ထားမိကြပြီလေ။။ အရင်က ကျွန်တော် သူ့ကိုချစ်ကြောင်းဝန်ခံခဲ့တဲ့အဆင့်။ အခု နှစ်လိုစွာနမ်းရှုံ့ ခြင်း၊ အ၀တ်မပါ တစ်ယောက်ဘေးမှာ တစ်ယောက်ထိုင်ရင်း ငြိမ်သက်နေမိကြတဲ့အဆင့်။ လူသူတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ လယ်တောပြင်ကြီး ထဲ....အမှတ်တရများစွာရှိတဲ့ အကောင်း အဆိုးရောနေတဲ့အဖြစ်တွေရှိတဲ့ အဆင့်များကိုကျော်လွန်ကာ ရှေ့ဆက်ဖို့...အင်း။ ကျွန်တော် တို့နှစ်ဦးသားကြား ပေါင်းသင်းဆက်နွယ်မှုအဆင့်တွေအလွန်မြန်သွားတာကို မထိန်းနိုင်ခဲ့ဘူး။ မြတ်သူအနေနဲ့လည်း စဉ်းစားဖို့၊ တွေးချင့် ဖို့၊သူ့ကိုယ်သူ ဆုံးဖြတ်ဖို့ အချိန်အနည်းငယ်ယူရမှာ သေချာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်း ကျွန်တော်နှင့် လုံးလုံးလျားလျား ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ကြပြီ။
"မင်းကြည့်ရတာ ဒီနေရာမှာတော့ အတွေးနက်နေပုံပဲ"
မြတ်သူ့မျက်ဝန်းတွေကို စိုက်ကြည့်နေရင်း ကျွန်တော်ပြုံးလိုက်မိပြန်တယ် တစ်ချက်။
"ငါလား မင်းထင်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မသိတော့ဘူးကွာ....ငါတို့ချစ်သွားကြတာနည်းနည်းမြန်သွားသလား ငါဆိုလိုတာကကွာ နှစ်ဦးသား နေထိုင်ခဲ့တဲ့ပုံစံတွေက မတူကြဘူး၊ ငါကသာ မင်းကိုရူးရူးမူးမူး ဖွင့်ပြောပြီး ထွက်ပြေးလာခဲ့တာမဟုတ်လား"
သူ ကျွန်တော့်မျက်နှာကို စကားမဆိုဘဲ စိုက်ကြည့်နေရဲ့။ "မင်းက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းခံစားချက်ကို ဖွင့်မပြောပြတတ်ဘူးလေ။ ငါ့မှာသာ တစ်ယောက်တည်း တိုက်ပွဲဝင်နေရတာအကြာကြီး၊ ငါ...ငါမင်းကိုချစ်တယ်ကွာ၊ မင်းကို စိတ်အနှောင့်အယှက်သဘောဖြစ်သွားအောင် လုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူး....ဆောရီး မြတ်သူ"
ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းရိပ်ထဲ ၀မ်းနည်းမှုတွေယှက်သန်းလာတာကို သူမြင်သွားသလားမသိ သူ့နှုတ်ဖျားက "ဟုတ်တယ်၊ ဟုတ်တယ် ဘိုဘို....ဒါပေမဲ့ အားလုံးက အမှန်တရားတစ်ခုပါ။ ငါနှင့်မင်းနှင့် ကြုံတွေ့ရမယ့် ဘ၀ဆိုတဲ့အခက်အခဲကို မျက်နှာခြင်းဆိုင်လိုက်ကြ တာပေါ့"
"မင်း...ငါ့ကိုဖွင့်ပြောခဲ့တဲ့ညကတော်တော် အံ့သြသွားခဲ့မိတာကွ၊ တစ်ယောက်အကြောင်းကို စဉ်းစားပြီး တစ်ညလုံးလိုလို သတိရနေတယ် ဆိုတာ ငါပဲကို။ ငါ....မင်းကို ကတိပေးပါတယ် ဘာပဲလုပ်လုပ် မင်းသဘောဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်စေရမယ်လို့"
နုညံ့တဲ့စကားပြောသံနှင့်အတူ ကျွန်တော့်ကို ပြန်စိုက်ကြည့်လာတဲ့ မျက်ဝန်းဝိုင်းဝိုင်းတွေဟာ အရည်တစ်ချို့လိမ်းကျံလို့ပါပဲ။ ကျွန်တော့် အချစ်တွေ၊ အကြင်နာတွေကို သူအမှန်တကယ်လိုအပ်သွားတယ်ထင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မြတ်သူရဲ့ ခေါင်းထဲက ခလုတ်တစ်ခုကို ဖျက် ကနဲဖွင့်လိုက်လို့ လင်းကနဲဖြစ်ပြီး ကျွန်တော့်အချစ်ကို သဘောပေါက်သွားတာပဲဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ကျွန်တော့်ဘက်ကတော့ ရာနှုန်း ပြည့်ကို မျှော်လင့်ချက်တွေနှင့် ပြည့်နေပါပြီ။
"အံအားသင့်စရာ" ကျွန်တော်တကယ့်ကို အံအားသင့်သွားမိတာက မြတ်သူရဲ့စိုစွတ်ပူနွေးတဲ့လျှာဟာ ပျော့နေသော ကျွန်တော့်ငပဲဆီ ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပါ။ မြတ်သူ လှုပ်ရှားလိုက်တာ မြန်လွန်းတော့ ဘာလုပ်နေရာကနေ ဦးခေါင်းက ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံဆီ ရောက် သွားမှန်း သတိမမူလိုက်မိပါဘူး။ ကျွန်တော့်စိတ်တွေကသာ အံ့အားသင့်နေတာ ကျွန်တော့်ပေါင်နှစ်ဖက်က အလိုက်သင့်ကားပြီး ဖြစ်နေရောဗျာ။ အိုး..!! မြတ်သူ အားလုံးအသင့်ဖြစ်နေပြီပဲ။
မြတ်သူရဲ့ ပူနွေးနေတဲ့ လျှာအဖျားလေးဟာ ကျွန်တော့်ငပဲရဲ့ ကွမ်းသီးခေါင်းကို စက်ဝိုင်းလှည့်သလိုမွှေပြီး ကစားတာ....အား...ကျွန်တော့် နှုတ်ဖျားက မထိန်းနိုင် ညည်းညူသံ ထွက်သွားရသလို ကျွန်တော့်ခြေဖျားလေးတွေလည်း ကွေးညွှတ်တုန်ခါသွားရပါတယ်။ လျှာနဲ့ကစား လိုက် နုညံ့တဲ့ နှုတ်ခမ်းသားတွေနဲ့ မျှဉ်းစုပ်လိုက်လုပ်နေတာကြောင့် ကျွန်တော့်ငပဲဟာ ပြန်လည်တုတ်ခိုင်ကာ ရှည်လျားလာရပြန်ပါပြီ။ ပန်းသွေးရောင်တောက်နေရာမှ အကြောပြိုင်းပြိုင်းထလာတာများ မြတ်သူ လန့်သွားမှာစိုးရိမ်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို မြတ်သူက စူးစမ်းမျက်ဝန်းတွေနှင့် ကြည့်နေဆဲ။ ကျွန်တော့်မှာ အခြားတစ်ကမ္ဘာကို မော့်ကြည့်သလိုမျိုး ခေါင်းတမော့မော့ လည်တခါခါ ဖြစ်ရပါတယ်။ မြတ်သူ့ မျက်ဝန်းတွေပြန်မှေးမှိတ်သွားပြီး သူလုပ်နေဆဲအလုပ်ကို အာရုံစိုက်အလုပ်များပါ၏။
ကျွန်တော်အမြဲလို ဂုဏ်ယူပြီး ကြွားစိန်လုပ်ဖြစ်နေတဲ့ ညီဘွားကြီးဟာ အခုတော့ ၇လက်မနည်းပါး ထွားလာပြန်တော့ မြတ်သူ နောက် တစ်ဆင့်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ ခဏငြိမ်သွားပြန်တယ်ဗျ။
ကျွန်တော် နားလည်ပါတယ် ဒါဟာ သူ့အတွက် အဦးဆုံးအတွေ့အကြုံဖြစ်တာကြောင့် ဖြစ်မှာပါ။ သူပြောပြဖူးတဲ့ ကလပ်ထဲမှာတွေ့ဖူးတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် ကီးပေးတာကို ခံခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာကိုအခြေခံပြီးတော့ရယ်၊ Online က ကြည့်ဖူးတဲ့ porn video clips တွေကို အခြေခံပြီးတော့ရယ် သူကြိုးစားလိုက်ခြင်းလေ။ ဒါပေမဲ့ သူကျွန်တော့်ငပဲကို နှစ်လိုစွာ စိုက်ကြည့်ပြီး တဖြည်းဖြည်း သူ့နှုတ်ခမ်းတွေနှင့် ဖိကပ်လိုက်တယ်။ "အာ...အ.." နုညံ့သော စိုစွတ်သော နှုတ်ခမ်းသားများကို ဖြတ်သန်းပြီး အာခံတွင်းထဲအဆုံးထိ မျိုချလိုက်တာဗျ။
"Ooooooooohhhhh!!!" ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားက မထိန်းနိုင်စွာ အော်ညည်းမိပါတယ်။
"မင်းကြိုက်တယ်ပေါ့?" မြတ်သူက အသံခပ်တုန်တုန်နှင့်မေးပါ၏။
မြတ်သူမလုပ်ဖူးလို့သာတော်တော့တယ် သူ့နှုတ်ခမ်းသားများနှင့်အတူ လျှာတွေ အာတွေဟာ တော်တော်စွမ်းတာ။ ကျွန်တော့်မှာ ကျေနပ်မှုရဲ့အလွန်ကို ရောက်ရောက်သွားရပါတယ်။ ကျွန်တော် ယုံတောင်မယုံနိုင်သလိုလိုဖြစ်ရတယ် "မြတ်သူ" အလန်းဇယား မြတ်သူ တစ်ယောက် ကျွန်တော့်ငပဲကို ရှယ်ကီးပေးနေခြင်းလေ။ "အမလေး...ရှီး" ဘယ်လို ဘယ်လိုများ မြတ်သူ လုပ်နေတယ်မသိ မွေးကတည်း က တတ်ကျွမ်းလာသလား ထင်ရပါရောဗျာ။ ကြုံဖူးသမျှ ထဲမှာတော်တော့်ကို ပြည့်စုံလွန်းတဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်သလို မြတ်သူသည်လည်း နှစ်သက်နေပါတယ်။ "အာ...အ..ရှီး" သူ မလုပ်ဖူးတာကို အစွမ်းကုန် စမ်းသပ်နေတာလားမသိ နည်းပေါင်းစုံကို ကစားနေတော့တာ သူ့ နှုတ်ခမ်းတွေ လျှာတွေနှင့်လေ။
ခပ်ဖောင်းဖောင်း သံခမောက်ပုံ ကွမ်းသီးခေါင်းလို ငပဲခေါင်းကို လျှာကိုအပြားလိုက်ထားပြီး လျက်ပြုနေတာများလေ ကွမ်းသီးခေါင်းထိပ် အ၀လေးကို ကလိလိုက်၊ ငပဲအောက်ခြေဆုံး ရွှေဥနားထိတစ်ခါ အလုပ်များနေတာပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာ ချို၊ချဉ်၊ငံ အရသာကိုသူရနေ လို့များလား မသိပါဘူး။
မိနစ်တွေ ကျော်ဖြတ်လာရင်း ကျွန်တော့်စိတ်တွေ တဖြည်းဖြည်း ပြင်းထန်လာတာ ဘယ်လောက်များ ထိန်းထားနိုင်မလဲမသိတော့ပါဘူး။ ငပဲခေါင်းလေးကနေ တစ်စက်လောက် မြတ်သူ့လျှာပေါ်ကျတဲ့အချိန်မှာတော့ မြတ်သူ့ပေါင်ခြံက ငပဲကြီးကလည်း အစွမ်းကုန်မာတောင် နေပြီဗျ။ ဟဲ....ကျွန်တော့်ငပဲကို ကီးနေရင်းမှာ မြတ်သူ သူ့ငပဲကိုသူဆုပ်ကိုင်ကာ ခပ်ဖြည်းဖြည်းကစားတော့တယ်လေ ပြောတာမပြီးသေး ခင်ပေါ့။
"ဆက်....ဆက်ပြီး စုပ်ပေး.....ပေးကွာ ငါပြီးတော့မယ်" ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားက မိန့်မိန့်မူးမူးထွက်လာပါတယ်။
သူ့ပါးစပ်ထဲ ကျွန်တော့်ငပဲကိုငုံထားရင်း ကျွန်တော့်ကိုမော့ကြည့်ရင်း ပြုံးတယ်။ အဲဒါပဲ...အဲဒါပဲ ခပ်ပြင်းပြင်းစုပ်မှုတ်လျှာကစားမှုတွေ အား....နောက်ပြန်မဆုတ်နိုင်တော့ဘူး။ ကျွန်တော့်ငပဲထဲက သုက်ရည်တွေ မြတ်သူရဲ့ ခံတွင်းထဲ တစ်လျော့ပြီး တစ်လျော့ ပန်းထည့်မိ တော့တယ်။ တစ်ခါဆိုတစ်ခါ အများကြီး အများကြီး မြတ်သူတောင် မမျိုချနိုင်တော့ဘူး နှုတ်ခမ်းထောင့်စွန်းတွေကနေ စီးကျကုန်ပါရော။ မြတ်သူ အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ သုက်ရည်အရသာကို စမ်းသပ်ခံစားနေသလားမသိ ကျွန်တော့်ငပဲကို ပျော့ပျောင်းလာချိန်မှ ရပ်တန့် တော့သည်ပဲ။ မြတ်သူ သူ့နှုတ်ခမ်းထောင့်နှင့် ပါးပြင်တလျောက်ကို လျှာတစ်ချောင်းလုံးထုတ်ပြီး လျက်တယ်။
"ကဲ...ငါ ကူညီပါ့မယ်ကွာ" ကျွန်တော် နှစ်လိုလက်ရပြုံးလိုက်မိပါတယ်။ ခပ်မော့မော့ဖြစ်နေတဲ့ မြတ်သူ့နှုတ်ခမ်းကို တပ်မက်မှုပြင်းစွာ ကျွန်တော် နမ်းစုပ်လိုက်ရော။ သူ့နှုတ်ခမ်းလွှာတွေထဲက ကျွန်တော့်သုက်ရည်ရဲ့ အရသာကို ပြန်ခံစားရတာ ရင်ထဲတစ်မျိုးဖြစ်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ချစ်ရသူလေးရဲ့ နားသယ်စပ်တို့ ပါးပြင်ပေါ်က အချို့သော သုက်ရည်စက်အချို့ကိုလည်း ကျွန်တော်နှစ်လိုစွာ လျှာနှင့်ဖယ်ရှား ပေးတာပေါ့ဗျာ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော် နောက်ကိုဆုတ် နုနုညံ့ညံ့မြက်ခင်းပေါ် ခဏတော့ ထိုင်ချမိပါတယ်။
"တော်တော်ကောင်းတယ် မြတ်သူရာ။ ပထမဆုံးအကြိမ်ဆိုတာသေချာလား မြတ်သူ? မင်းဟာ Pro တစ်ယောက်လိုပဲ"
ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေ သူ့ပေါင်ခြံဆီရောက်တော့ ရှည်လျားတုတ်ခိုင်တဲ့ငပဲကြီးဟာ ချက်ပေါက်ရှိရာစီ လမ်းညွှန်နေပါတယ်။
"ကြည့်ရတာ မင်းလည်း ကြိုက်ပုံရပါတယ်" ကျွန်တော် ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်မောရင်း မြတ်သူ့ငပဲကို စိုက်ကြည့်မိပါတယ်။ သူလည်း ရှက်ရယ်ရယ်ရင်း ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းကို ငုံ့ကြည့်တယ်လေ။
"အို...မင်းစိတ်ထဲဘာတွေရှိနေတာလဲ ပြောစမ်း ဘိုဘို"
"ဟား...ဟား မှန်းကြည့်လေ ဘာလဲဆိုတာ"
"အင်း...." မြတ်သူက ကျွန်တော့်ကို မြတ်နိုးစွာကြည့်ရင်း ပါးပြင်ကို တစ်ချက်နမ်းလိုက်ကာ တုန့်ပြန်တယ်။
"ဒါပေမဲ ငါတို့အချိန်နည်းနည်း စောင့်ရမှာပေါ့။ ငါတို့ အိမ်ပြန်ဖို့ တကယ်လိုနေပြီ။ မင်းမိဘတွေက တော်တော်စိုးရိမ်နေပြီ မင်းကို"
မြတ်သူ စကားတွေပြောရင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်ခန္ဓာတွေပေါ် အ၀တ်မဲ့နေတာကို ပြန်သတိကပ်မိသွားဟန်တူတယ်။ ပြီးတော့ သူ ကျွန်တော့်ကို ပြုစုပေးမိတဲ့ အဖြစ်တွေကိုရော တခြားစိတ်ခံစားမှုရော ရောပြွမ်းကာ သူ့ပါးပြင်မှာ ရှက်သွေးရဲတက်လာတာကို ကျွန်တော် သတိပြုမိရော။ ကျွန်တော် သူ့မျက်နှာကိုကြည့်နေသူဆိုတော့ အဲ့အပြောင်းအလဲကို ရုတ်တရက်သတိထားမိလိုက်တဲ့ခဏ.......
Alex Aung (23 Oct 2012)
စာကြွင်း ။ ။ Help ဇာတ်လမ်းကို အဆတ်မပြတ်မရေးဖြစ်ဘဲ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းရေးဖြစ်တာလေးကို ပဲ စောင့်ဖတ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းကို ကျေးဇူးတင်မိပါကြောင်း...။
Posted by Alex Aung at 10:56 PM 1 comment:
I amaman, age 52 years old and service on board asa(့). I like to request you about my problem regarding my sexual power which is very weak. Please give me advice to which specialist to see and take treatment or some medicine to take regularly. At this age, most of the men need something. If Prostate problem and Erectile Dysfunction are excluded, there are very effective medicines. You may be aware of Viagra and etc. Don’t try injections.
Erectile dysfunction (ED) ပန်းသေ-ပန်း ညှိုးအတွက် သောက်ဆေးတွေ
• Sildenafil (Viagra), Vardenafil (Levitra or Staxyn) နဲ့ Tadalafil (Cialis) ဆိုတဲ့ ဆေးနာမည်တွေနဲ့ အမေရိကားမှာ ဝယ်လို့ရတယ်။ တခြားနာမည်တွေနဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေမှာ ထုတ်လုပ်တယ်။ နာမည်ရှိတဲ့ ဆေး ကုမ္ပဏီတွေက ထုတ်တာကိုသာ သုံးသင့်တယ်။
• Avanafil (Stendra) ဆေးကို FDA ကနေ ၂ဝ၁၂ ဧပြီလမှာ ခွင့်ပြုချက်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်တယ်။
• ဆေးတွေအားလုံး ထိရောက်တယ်၊ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးလဲ နည်းတယ်။ လူသုံးများလှနေပြီ။
• အလုပ်လုပ်ပုံ ခပ်ဆင်ဆင်တူတယ်။
• Cialis ကို အစာနဲ့ နီးနီးဝေးဝေး သောက်နိုင်တယ်။ ချက်ချင်းလို သက်ရောက်လို့ ကြိုသောက်စရာ မလိုဘူး။ တရက်ခံတယ်။
• Cialis (36-hour) ဆိုရင်တော့ မိနစ် ၃ဝ ကြိုတင်သောက်ပါ။ ၃၆ နာရီခံတယ်။
- Heart problems (aortic stenosis or left ventricular outflow obstruction, angina, abnormal arrhythmia orarecent heart attack, stroke) နှလုံးရောဂါရှိသူတွေ၊ High or low blood pressure ထိန်းဘို့ခက်ခဲတဲ့သွေးတိုးရောဂါ၊ Eye problems (retinitis pigmentosa) မျက်စိရောဂါရှိသူ၊ Severe liver disease ဆိုးဝါးတဲ့ အသဲရောဂါရှိသူ၊ Kidney disease ဆိုးဝါးတဲ့ ကျောက်ကပ်ရောဂါ ရှိသူတွေ ဒီဆေးကို မသုံးသင့်ဘူး။
• ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ -
- Headache ခေါင်းကိုက်တာ အများဆုံးဖြစ်တယ်။ Indigestion အစာမကျေဖြစ်တယ်။
- Stuffy or runny nose နှာခေါင်းက နှာစေးသလိုဖြစ်မယ်။
- Dizziness ခေါင်းမူးတာနဲ့ fainting သတိလက်လွတ်ဖြစ်ချင်တာ အတော်ရှားရှားပါးပါးဖြစ်မယ်။
- Cialis ကြောင့်ဆိုရင် ခါးနာ၊ ကြွက်သားနာတာဖြစ်နိုင်တယ်။
- Viagra and Levitra တွေကနေ Flushing မျက်နှာနီမြန်းတာဖြစ်မယ်။ ခဏတာ မျက်စိ ကြည့်မကောင်းတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။
Erectile Dysfunction 10 Things ယောက်ျားတွေကို ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ အချက် (၁ဝ) ချက် http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/03/10-things-that-can-deflate-your.html Erectile Dysfunction ပန်းသေ-ပန်းညှိုး http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/03/erectile-dysfunction-ed.html
Erectile Dysfunction Medicines (1) ကျား-လိင်အင်္ဂါ မသန်မာစေတဲ့ဆေးများ http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/03/ed-medicines.html
Erectile Dysfunction Risk ပန်းသေ-ပန်းညှိုး သာက်ဆေး သတိပေးချက် http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/03/erectile-dysfunction-risk.html
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ (၁၁-၈-၂ဝ၁၂ )
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ – ကျား-လိင်အင်္ဂါ သန်မာစေတဲ့ဆေးများ (၂)